PM Ntsay Christian : Tsy mahavaha olana -
AccueilSongandinaPM Ntsay Christian : Tsy mahavaha olana
Hanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra maro manerana an’i Madagasikara taorian’ny nanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian hitantana ny governemanta. Mitaraina noho izany ny vahoaka malagasy, satria sady tsy afa-miasa am-pilaminana no mitaintain-dava vokatry ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy. Nazava anefa ny fanambarana nataon’ity Praiminisitra ity nandritra ny fotoana nandraisany ny fahefana, fa “hametraka filaminana sy fitoniana eto amin’ny firenena, ahafahan’ny vahoaka malagasy miatrika ny fifidianana filoham-pirenena”. Raha ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny, dia tsy ho tratra io tanjona napetraky ny Praiminisitra io. Mihamahery vaika sy mitombo isan’andro mantsy ny fanafihana ataon’ireo jiolahy. Mitombo isan’andro ihany koa ireo faritra ahitana izany fanafihana izany. Tsy manana vahaolana matipaika entina mametraka fandriam-pahalemana akory anefa ny lehiben’ny governemanta raha ny zava-misy ankehitriny.Izany hoe lasa resa-be, sy fampanantenana poakaty nentina nampitoniana ny saim-bahoaka fotsiny no natao noho ny fitiavan-tseza. Toa miraviravy tanana mantsy ny fahitana an’ingahy Ntsay Christian ankehitriny manoloana izao fiainam-bahoaka misavoritaka tanteraka izao.
Tsy ny sehatry ny fandriam-pahalemana ihany no tsy ahitan’ny governemanta Ntsay Christian vahaolana, fa ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny ihany koa. Tsy mitsahatra miakatra mantsy ny vidim-piainana noho ny fiakaran’ny vidin-tsolika. Mbola tsy ahitam-bokany ihany koa ny fitakian’ireo sendika maro amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny fitokonan’ireo sendikan’ireo mpampianatra mpanabe, sy ny eo anivon’ny fadintseranana, ary ireo fitakiana sendikaly amin’ny sehatra maro amin’izao fotoana izao. Ny antoko Mapar Izay nanendry azy anefa no tompon’antoka tamin’ny fanetsehana ireny fitakiana sendikaly ireny teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai. “Mahay manakorontana, fa tsy mahay mandamina rehefa tena omena sehatra” hoy ireo olona sasany nety natao fitaovana politika teny an-kianja. Mbola henjana noho izao efa iainana ankehitriny izao no hihatra amin’ny vahoaka malagasy raha sanatria ka ho lany eo ny mpitarika ny Mapar raha ny hevitr’ireo mpandinika ny fiainam-pirenena. Noho ny fandraisan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny andraikitra amin’ny maha filoham-pirenena azy mantsy no mbola mampilamindamina ny raharaha ankehitriny.
Home Improvement dans Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
Health And Fitness dans Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
Tao anatin’ny taona maro, nampiasana ny fitombokase hosoka misy ny anaran’ny praiminisitra no nahazoan’ny lehilahy iray fiara “touareg”. Tamin’ity taona 2017 ity vao tra-tehaka ny tenany. Tazomina ao amin’ny toby Ratsimandrava nanomboka omaly io fiara ...Tohiny
Lalatiana Ravololomanana : “Tsy mety intsony ny hitondran-dRavalomanana ny firenena”
Fanehoan-kevitry ny Filoha : “Mandrora mitsilany ireo mpanely tsaho”
radiographic markers: Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add…
scams involving certified checks: I do agree with all of the ideas you've presented in your post. They're really convincing and will certainly work.…